မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်၊ သရော်စာကဏ္ဍမှ စာမူတစ်ပုဒ်အား ခံစားမိခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်၊ သရော်စာကဏ္ဍမှ စာမူတစ်ပုဒ်အား ခံစားမိခြင်း
မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်၊ သရော်စာကဏ္ဍမှ စာမူတစ်ပုဒ်အား ခံစားမိခြင်း
Posted by King on Nov 24, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News, Myanmar Gazette, Other - Non Channelized, Think Different | 17 comments
ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး အလုပ်တွေလည်းရှုပ် လူလည်း ငြီးစီစီဖြစ်လာသောကြောင့် ယနေ့ထုတ် ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို လန်လောကာ သတင်းလေးများ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဖတ်ကြည့်မိပါတော့တယ် … ကိုယ်ပဲ သည်ဂျာနယ်ကို မဖတ်တာကြာလို့လား မသိဘူး ထပ်တိုးလာတဲ့ ကဏ္ဍာကို အမှတ်တမဲ့ပါပဲ … ယခုဖတ်မိမှာပဲ သည်ကဏ္ဍလေးကို သဘောလည်း ကျမိပါရဲ့ဗျာ … ခေါင်းစဉ်တင်ပဲ တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာနဲ့ပဲ ဆက်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ .. ခေါင်းစဉ်ကတော့ ဆက်သွယ်ရေးမှ လူကြီးမင်းများ ခင်ဗျား .. ဆိုပြီးပေးထားလေရဲ့ ….. ကျွန်တော်လည်း အခုတစ်လော ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေး စိတ်ညစ်နေတာဆိုတော့ …. စိတ်ညစ်ဆိုဗျာ အင်တာနက်လိုင်းသုံးလို့ရတဲ့အချိန်မှာ ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် Notice စာကို အရင်ဖတ်ပဲ ဖတ်နေရတယ် ဒီစာက ဆက်သုံးဖို့ စိတ်ဓာတ်ကျစေတယ်ဗျာ …. အဲဒီစာလေး ပေါ်လာတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမလိုပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ လိုင်းက လုံးဝကို သုံးလို့မရလို့ပဲ DSL မီးလေးလင်းပါလို့ ပြုခဲ့သမျှ မကောင်းမှုတွေကို တိုင်တည်ကာ သစ္စာပြုပေမယ့်လည်း ဘယ်တော့မှ မလင်းတဲ့ လမ်းထဲက ဓါတ်မီးတိုင်တစ်ချို့လို ဘယ်တော့မှ မလင်းခဲ့လို့ပါဘဲ။ ကွန်ပလိန်းဌာနကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ဟိုဟာလုပ်ခိုင်း ဒီဟာလုပ်ခိုင်းနဲ့ (လုပ်ခိုင်းသလိုလုပ်ခဲ့တော့လည်း မရခဲ့) … နောက်ဆုံးစိတ်လျော့ပြီး နောက်လိုင်းတစ်ခုနဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ တစ်ဖက်ခန်းက ကွန်ပျူတာကိုပဲ သုံးနေရပါတော့တယ် … အခုလည်း ရေးသာရေးရတာ လိုင်းကျသွားရင်တော့ ငါတော့ ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့ စိတ်က အခုမှပဲ ၀င်လာတော့တယ် …. .. စာရေးသူရေးထားတဲ့ စာထဲမှာပါတဲ့
စာရေးသူရဲ့ တင်ပြချက်ကို ထောက်ခံကြောင်းလည်း ထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ် … ကျွန်တော်တို့လို သာမန်လခစားဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ လိပ်ခေါင်းထွက်မတက် အော်ဟစ်လိုက် ခလုပ်မတိုက်မိအောင် သတိထားရင် ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ ပြေးရင်းပြောကာ လိုရင်းပြောဆိုဖို့ အချိန်တွေအများကြီး သုံးစွဲခဲ့ရပါတယ် …. (စာကြွင်း။ တစ်ချို့ကလည်း ပြောကြမှာပေါ့ မင်းတို့ သုံးတဲ့ ဟန်းဆက်တွေက ဈေးပေါတာတွေသုံးတာလို့ … ပြောလဲမတက်နိုင်ဘူး ဒါလေးတစ်ခုတောင် လစာထက်တောင် ကျော်နေသေးတယ်ဗျ… …….. ဆက်သွယ်ရေးဌာနကလည်း … တာဝါတိုင်တွေ တည်ဆောက်နေပါတယ် … မလုံလောက်သေးတော့ အခက်အခဲတွေရှိမှာပေါ့ … အစပိုင်းဆိုတော့ အခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ် နောက်ပိုင်းလည်း မသေချာသေးဘူးဆိုပြီး … )
နောက်တစ်ချက်ကတော့ အင်တာနက်မြန်နှုန်းကိစ္စနဲ့ ဖော်ပြထားတာပါ … အင်တာနက်ကိစ္စကိုတော့ အပေါ်မှာ ကိုယ်တွေ့အနည်းအကျဉ်းရေးပြထားတော့ ဆက်မရေးတော့ဘူးဗျာ စာရေးသူရဲ့ စာမူကို အောက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ့မယ် ….. ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး စကားစုကတော့ စာရေးသူရဲ့ စာကြွင်းဆိုပြီး ကွင်းစ ကွင်းပိတ်နဲ့ နောက်ဆုံးဖော်ပြခဲ့တာကိုပါပဲ … ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးအပြီးမှာ စာရေးသူက ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါတယ် ကျေးဇူးတင်စကားပြီးတော့ ဒီအောက်က စာသားလေးနဲ့ စာကြွင်းဆိုပြီး နိဂုံးချုပ်သွားပါတယ် …………
မူရင်းစာကိုတော့ မြန်မာတိုင်း(မ်)ဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂၈) အမှတ် (၅၄၅) (၂၅၊၁၁-၁၊၁၂၊၂၀၁၁) သရော်စာကဏ္ဍ စာမျက်နှာ(၈)မှာ ဖော်ပြထားပါတယ် …
အွန်လိုင်းက ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် .. http://www.myanmar.mmtimes.com/2011/news/545/satire.html
အပြည့်အစုံကို ဒီမှာ ဖတ်သွားလို့လည်း ရပါတယ် ….
စဉ်းစားပေးပါမယ် ၊ အားနာပါတယ် ဆိုသော စကားမှာ သူရို့ လက်သုံးစကား ဖြစ်သဖြင့် သည်းခံပေးပါ ခင်ဗျား ။ ( မှတ်ချက် ။ အငှားပြောပေးချင်းဖြစ်သည် )
အငှားပြောပေးတယ်ဆိုတော့ …. အင်း …
ကိုပေနဲ့ တယ်လီပို့က ကောင်မလေးနဲ့ .. အဟွင်း ဟွင်း …
လုံးဝ မပြောပြနိုင်ဘူး ဗျာ
အသေ သပ်ချင် သပ်သွား
ဘီယာမတိုက်မချင်း ကျွန်ုပ် မောင်ပေ မဖြေနိုင်ဘူး ဆိုတာ ဘဲ
ဘီယာတိုက်ပြီး အပီသာနှိုက်လိုက်လို့ရှိရင် မောင်ပေတစ်ယောက် ခံနိုင်ရိုးလားဗျ …
စာကြွင်း။ အပီနှိုက် = သတင်းအပီနှိုက်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏ ….
အပီနောက်မှာ အောက်ကမြင့် (–့) ထည့်လိုက်ရင်….
“Posted by king on Nov 24, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Mandalay Gazette, Myanma News, Other – Non Channelized, Think Different |”
……………………သေချာအောင် ဒိတ် ကိုစစ်ရတယ်။
(တစ် နဲ့ ကိုး လဲ မရှိပါဘူး။ ရှိလို့ရပါတယ်၊ နားမရှင်းသူများကျော်ဖတ်ပါ)
အားလုံးနဲ့ ကင်းအောင် နေသွားပြီလားလို့။
ပြန်ပေါ်လာတာရယ်၊ ခုလိုစာပြန်ရေးလို့ ဝမ်းသာပါသည် ခင်ဗျ။
ရေးစမ်းဘာဗျာ များများလေး၊ ဆက်သွယ်ရေးရဲ့အားနဲချက်တွေကို
ဂျာနယ်တွေမှာပြောလိုက်ရင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်နဲ့ ဘာမှလဲဖြစ်မလာဘူး။
ကိုကင်းလဲ အင်တာနက်လို ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက်ပါလား
မူရင်း စာရေးသူ ရော ကိုကင်း ရော အမှန်ပြောတာတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ
အဲဒီလို သရော်စာလေးဖတ်ရင်း တွေးရင်းနဲ့မှ နေ့ရက်တွေကို ကျော်နေရတာပါ
အဲဒီလို သရော်စာလေးဖတ်ရင်း တွေးရင်းနဲ့မှ နေ့ရက်တွေကို ခွနရတာပါ
(ကျော်တာနဲ့ ခွတာ တူတူဘဲ နာတိဒယ် ဆြာရုပ်ရဲ့ :D)
ဘာမှပြန်ပြောတော့ဘူး … တော်ကြာ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း ဇာတ်တော်ကြီးတင်မဟုတ်ဘဲ
ဇာတ်ကြီး (၁၀)ဘွဲ့ အကုန်လုံး ………….
ဆက်သွယ်ရေးမှာ လုပ်တဲ့ သူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ပေါင်းစားနေတဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေက မလျှော့ချင်တာပါ။
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းကြီးများနဲ့ ပေါင်းစားကုမ္ပဏီများ ရှယ်ယာခွဲပြီး အမြတ်ထုတ်နေကြတဲ့ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ဈေးကွက်ကြီး မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေကြောင်းပါ။
အခုရေတွင်းတူးအခုရေကြည်သောက်ချင်လို့တော့ဘယ်ရမလဲလူကြီးမင်းတို့ရယ် အခုလိုရေးချင်တာရေးလို့ရတာဘဲကျေးဇူးတင်ကြည့်အုံး(ပေါက်ကရ) အချိန်တန်တော့နပိန်ကန်လိမ့်မပေါ့ ဈေးပေါတာဈေးကြီးတာခဏထား ခါးကြားမှာဖုန်းချိတ်ပြီး စတိုင်ထုတ်နိုင်တာဘဲ ကျေးဇူးတင်ကြည့်အုံး ကျေးဇူးတင်တက်ရင် တင်ဖို့ကောင်းပါတယ်(သည်အန်း)
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပြီး သင့်တော်အဆင်ပြေမည့်အချိန်တွင် (ဘယ်တော့လည်းမသိ) လိုအပ်သလို အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း..။
(လွှတ်တော်တွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးမှ ပြန်လည်ဖြေရှင်းသည့် လေသံဖြင့်…)
နဂိုကဖုန်းကဒ်ဝယ်ရတာဈေးကြီးပါတယ်ဆိုမှ .. ဖုန်းခလည်းဈေးမနည်းပါဘူး..
ကျနော့်မာတာမိခင်ကျေးဇူးရှင်တော့ပြောပါတယ်.. နင့်ကို တစ်ထောင်တန် GSM ထွက်ရင်..ငါကိုယ်တိုင် ဆက်သွယ်ရေးရုံးမှာ နေ့မနားညမအားဘဲ .. သွားတန်းစီပေးမယ်တဲ့.. (ကျနော်တို့က မူဆယ်ကကိုး တရုတ်ဖုန်းတွေပေါပါ့)
ဗြောင်လိမ် ဗြောင်စားလုပ်နေတာကတော့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ဟန်းဖုန်းတွေပါဘဲ။ ကာတွန်းတစ်ကွက် ကိုဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က ဟန်းဖုန်းနှစ်လုံးကို ဘယ်၊ညာ လက်မှာ ကိုင်ထားပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ဖုန်းကနေ ညာဘက်ကဖုန်းကို ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုပဲ ( လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော တယ်လီဖုန်းမှာ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်နေပါတယ်ရှင်..) တဲ့။
ဖုန်းကိုင်ထားတဲ့လူကအော်ပြီးပြောပါတယ်..။ (ဟဲ့ကောင်မ ငါ့ကို ဗြောင်လိမ် ဗြောင်စား လုပ်ပြီးပြောနေတယ်..။ ဒီဘက်က ဟန်းဖုန်းက ဟိုဘက်ကဟန်းဖုန်းကိုခေါ်နေတာလေ….၊ နင်လင်တွေက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဧရိယာ အပြင်ဘက်ရောက်ရမှာလဲ….။ဆိုပြီး ဒေါပွပွနဲ့ အော်ပြောနေပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ၊ တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော် မှားသွားပါတယ် ခင်ဗျာ စတဲ့ စကားလုံးလေးတွေက လူတစ်ဖက်သားကို စိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့နားဝင်ပီယံ ရှိစေတဲ့ စကားလုံးလေး တွေပါ။ ဈေးအလွန်ပေါသော၊ ကုန်ကျစရိတ် အသက်သာဆုံးသော စကားဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် လူတိုင်းမပြောနိုင်ကြပါဘူး။